Photoshop CC 2015.1, mid ka mid ah cusboonaysiinta waaweyn | Abuurista khadka tooska ah
Photoshop CC 2015.1, mid ka mid ah cusboonaysiinta weyn ee Adobe
Adobe ayaa daabacday dib-u-eegis qoto-dheer oo ku saabsan badeecadeeda ugu caansan, Photoshop. Nooca cusub ayaa loo yaqaan Photoshop CC 2015.1, wuxuu la yimaadaa taxane ah muuqaalada cusub iyo a gebi ahaanba muuqaal cusub. Si aad ah ayey ufiican tahay dhakhso ka badan kii hore, isku xirka isticmaalaha ayaa iswaafaqsan, waxaana jira daraasiin astaamo cusub oo diiradda saaraya naqshadeynta iyo sawir qaadid si socodka shaqadu u fududaato.
1 UI LOO ISTICMAALAY
2 WAXYAABAHA LAGA HORUMARIYO SHAXDA SHAQADA
3 HORUMARINTA TARBIYADDA
4 MUUQAALKA LA ISKU QAADAN KARO
5 SHAQO KU HORMARISAY
UI LOO ISTICMAALAY
Waxa ugu horreeya ee aad ogaan doontid waa shaashad soo dhaweyn cusub. Shaashadda soo dhaweynta waxay soo bandhigeysaa liiska faylasha ugu dambeeya, oo lagu kala sooco liiska ama shabakadda. Marka aad bilowdo la shaqaynta dalabka waad arki doontaa sawirrada thumbnail ku xiga magacyada faylka. Waxaan sidoo kale arki doonaa talo soo jeedin shaqsiyadeed oo ku saabsan casharrada, oo ku saleysan aaladaha iyo qaababka inta badan la isticmaalo.
Dhamaan interface user, oo ay ku jiraan shaashadda soo dhaweynta, ayaa ahayd dib loo naqshadeeyay si loo abuuro isdhexgal casri ah. 'Hooska' waa laga saaray, iyo wada hadalada hada u dhigma mawduuc kasta oo aad doorato, (iftiin ama mugdi), ayaa dib loo eegay si loo waafajiyo dhammaan dalabka.
Badhamada caydhin ee 1990-kii ayaa sidoo kale lagu badalay (badhamada cirfiid) badhamada cirfiid wareegsan. Astaamaha toolbar ayaa dib loo eegay. Soo dhaweynta soo-dhaweynta aaladda cusub waxay ku siinaysaa awood aad ku yeelato u habeyn iyada oo ku saleysan baahiyahaaga iyo doorbidkaaga.
WAXYAABAHA LAGA HORUMARIYO SHAXDA SHAQADA
Adobe aad buu uga daahay soo bandhigida tabeellooyinka Photoshop, laakiin hadda waa la soo daayay aad u dhakhso badan waxayna la yimaadaan wax-ku-kordhinta Photoshop CC 2015.1 iyagoo ka dhigaya Photoshop Artboards mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee la hirgaliyo.
Daraasiin ka-beddello yar-yar, oo ay ku jiraan dib-u-habeynno cusub ayaa lagu daray Artboards, iyo sidoo kale dhowr astaamo waaweyn.
Hadda waxaad si fudud u isticmaali kartaa miisaska shaqada kooxda, si ay u abaabuli karaan shaashado isku dhafan oo aad uga fudud. Hadda ah 'Tilmaamaha' waxay ku koobnaan kartaa hal shaashad shaqo. Gudiga Lakabyada Sidoo kale waxaa lagu sifeyn karaa sabuuradda, sidaa darteed uma baahnid inaad rogrogto oo ka baxdo lakabyadan mar kasta oo ay beddelaan.
Photoshop CC 2015.1 wuxuu soo bandhigayaa dhowr waxyaabood oo horumarineed oo muhiim ah oo la xiriira suugaanta qoraalka.
Halka ka hor intaadan raadin karin ilo, hadda waxaad ku kala shaandheyn kartaa ilaha kala-sooc ahaan, sida sans, ama qoraal. Waxa kale oo aad ku qori kartaa ilaha meelaha ugu cadcad xiddig, si marka dambe aad ugu kala shaandheyn karto waxyaabaha aad ugu jeceshahay.
Malaha cusbooneysiinta ugu soo dhoweynta badan ee Photoshop-kan cusub ayaa lagu daray '16pt' gudaha xulashada cabbirka qoraalka by default, taas oo si madax adayg ku maqnaa ilaa hadda.
MUUQAALKA LA ISKU QAADAN KARO
Photoshop-ka cusub ee CC 2015.1 waxaa ku jira dhowr waxyaabood oo la xoojiyay si loo sameeyo shaashadda taabashada ku habboon. Lagu daray a Habka shaashadda taabashada u heellan, taas oo ka dhigaysa jeedalku inuu weynaado oo si fudud loo isticmaalo. Sidoo kale lagu daray a 'Far 2 xoq' waayo, diido. Waxa kale oo aad heli doontaa guddi cusub oo u oggolaanaya dadka isticmaala shaashadda dhaqdhaqaaqa y naafo ah wareejinta, alt, iyo ctrl; taas oo siinaysa marin u helitaanka noocyo kala duwan oo toobiye oo awal laga isticmaali jiray kumbuyuutarka.
Muuqaaladan taabashada ah ayaa kaliya loo heli karaa dadka isticmaala Windows, hadda lama jaanqaadi karaan tufaax trackpad, laakiin Adobe diiradda weyn ee barnaamijyada moobiilka loogu talagalay aaladaha macruufka waxay ka dhigan tahay in tani ay u egtahay in lagu dhaqmayo mustaqbalka dhow.
SHAQO KU HORMARISAY
Shidaal siinta isbeddelka CC-ga ee badan, Photoshop hadda wuu awoodaa ka samee maktabad dukumenti hore. Waad dhoofin kartaa dhammaan hantida, ama waxaad dooran kartaa kaliya qaababka astaamaha, midabada, qaababka lakabka, walxaha caqliga badan, ama isku dar kasta. sidoo kale kara si toos ah u jiido oo hoos u dhig ka Lakabyada guddiga maktabaddaada
Isbedelada ugu waaweyn ee algorithms waxay ka dhigan tahay 'dhoofinta' waa ka dhakhso badan yahay 'Keydso Webka', gaar ahaan JPG y PNG. Dhoofinta ayaa sidoo kale soo saari doonta tayo sare sida 'Keydso Webka'.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Photoshop CC 2015.1, mid ka mid ah cusboonaysiinta weyn ee Adobe
GIF-yada farshaxanka iyo kuwa aan dhammaadka lahayn ee George Redhawk
Maxaa ku cusub nooca cusub ee Adobe InDesign CC 2015.2?